Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo heli Doona Abaal-Marin Qaali ah - Awdinle Online
Home News Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo heli Doona Abaal-Marin Qaali ah
Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo heli Doona Abaal-Marin Qaali ah
December 20, 2019 (Awdinle Online) – Hay’adda Save the children ee Caalamiga ah ayaa lagu soo waramayaa in ay qorsheyso in ay abaamarin siiso Xildhibaan ka tirsan Baalamanka Soomaaliya oo si xoog leh mudo dheer uga shaqeynayey u gar gaaridda Caruurta aqoonta ah iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta ah.
Xildhibaanka ayaa la sheegey in uu kasoo jeedo beelaha la heyb sooco ee Soomaaliyeed, walow uu yahay shaqi karti badan oo aad ugu dadaala waxbarashadda caruurta yar yar ee Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool muqdisho iyo xareeraheeda ayaa lagu sheegey shir asbuucan ay isugu yimaadeen madaxda sare ee hay’adda save the children.
Xildhibaanka ayaa magaciisa lagu sheegey Yuusuf Xayle Jimcaale Cadaan oo sida ka sheegey Baarlaman ku jira mudo ku dhow 10 sano, wuxuuna aad uga shaqeeyaa keliya caawinaada waxbarasha caruurta iyo in uu kaalmooyin bani’aadanimo siiyo dadka dan yarta ah ee aan shaqeysan karin.
Hay’adda Save the children waxaa ay si qoto dheer u wareysatey Madax sar sare oo ka tirsan Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo dhamaantood qirey wax qabadka xildhibaanka.
Dhowaan ayaa la shugayaa in xildhibaanka si lana filaan ah uu u helo abaal marinta.
Previous articleBeesha Caalamka oo amar dul-dhigtay Doorashada Soomaaliya ee 2020
Next articleDeputy Minister of Youth and Spots accused the Minister Corruption and mismanagement